सपनाको गन्ध क्लोरमफेनिकल भन्ने औषधिको जस्तो हुँदो रहेछ । विस्मृतिमा पुगेको यो गन्ध ह्वास्स गन्हाउने गरी वर्तमानले मेरा वरिपरि फैल्याइदिएको छ । त्यो टर्रो तम्तम्याइलो क्लोरमफेनिकलको गन्ध अहिले आएर नाकमा मात्रै होइन जिब्रोमा पनि अम्लजस्तो भएर बसिरहेको छ । कि दिमागमा पनि जम्यो ? यकिन छैन तर त्यो कतै न कतै अटुट मसँगै छ । मेरा दैनन्दिनका सबै कर्मकाण्ड खुरुखुरु चलिरहेकै छन्, गन्धले ओछ्यानै पारेको होइन । तर, सोच्ने ढंगमा बढ्तै असर पार्दै छ । त्यो तीतो, अमिलो कस्तो कस्तो गन्धले गर्दा मैले दुनियाँलाई जस्तो देखिरहेको थिएँ, त्यस्तो देख्न छोडेँ । भविष्यलाई जसरी आँकलन गर्दै थिएँ, त्यो पनि पूर्णतया बदलिने छाँट छ । अहिले भने भविष्यको त्यो दृश्य अत्यन्तै धूमिल छ । कुनै वर्षौँदेखि भग्नावशेष बनेको घरमा बाँकी रहेको एउटा मात्र प|mेम गरिएको फोटोजस्तो भएको छ भविष्यको अनुहार । गन्धको प्रभाव यति चर्को छ कि म चाहेर पनि त्यो प|mेममा पत्रैपत्र भएर टाँसिएका धूलो पुछ्न सकिरहेको छैन ।
मलाई औषधि गर्न पुर्याइएको नक्सलबारीमा, त्यो उहिल्यैको भाकपा मालेकालीन १९६७ छिन्नभिन्न भइसकेको थियो । चारु मजुमदार मारिएको दशक बढी भइसकेको थियो । कानु सन्यालको गतिमा सुस्तता आइसकेको थियो । उनीहरूका हतियार सम्भवतः डकैतीमा प्रयोग भइरहेका थिए । गरिब किसानले जोत्ने खेत पाएनन् । हलो छोडेर बन्दुक समाएका उनीहरूसँग अर्को उपाय पनि केही थिएन । जसरी जाने, त्यसरी नै बन्दुकको प्रयोग गर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो । पति मरेपछि आइमाईका चुरा ढुंगाले फुटालेर टुक्रा टुक्रा पारेजस्तो टुक्राहरूमा विभाजित बनिसकेको थियो नक्सलबारी । मसँग नक्सलबारीको सग्लो अनुहार खिच्न सक्ने सामथ्र्य थिएन उबेला । तर आज आएर लाग्छ फुंग उडेकी गरिब हिन्दु विधवाजस्ती बनेको हुँदो हो नक्सलबारी त्यसबेला । कुनै आदर्शको आभा, विद्रोहको राप, वा परिवर्तनको न्यानो, त्यहाँ केही थिएन । सायद त्यो ओसिलो नक्सलबारी तुहिएका सपनाहरूको थुप्रो बनेर बसेको थियो होला । किसान, मजदुर, महिला, पिछडिएका समुदाय, र आदिवासीका सपनाहरूको थुप्रो । परिवर्तनको खास्टो ओढ्न नपाएपछि तिनै तुहिएका सपनाहरूका कारण टाइफाइडले ग्रस्त बनेको हुँदो हो । ज्योति वसुले किसानलाई बाँडेको जग्गाले पनि त्यो टाइफाइड निको हुनेवाला थिएन । त्यसैले होला त्यहाँ चर्को गन्ध फैलिएको । सम्भवतः नन्दीग्राम र सिँगुरजस्ता ठाउँहरूबाट किसान लखेटिएपछिको समयमा त्यो गन्ध अझ विषाक्त बन्यो । अहिलेकी ममता बेनर्जीको घ्राण शक्ति कति छ, मलाई थाहा छैन ।
यो दुनियाँमा अझ पनि देब्रे ढल्केका अर्थात् वामपन्थी विचार र आन्दोलनहरूले नै मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउन सहयोग पुर्याउँछन् भन्ने विश्वास गर्नेको संख्या यथेष्ट छ । तर, विचार आफैंमा कुनै भौतिक शक्ति हुन सक्दैन जसले आफैं परिवर्तन ल्याइदेओस् । राजनीतिले विचारलाई भौतिक शक्तिमा बदल्ने हो । राजनीति गर्ने मानिसहरूले हो । के उचित विचारलाई परिवर्तनको भौतिक संवाहक बनाउने उचित मानिसहरू नजन्मने गरी यो धर्तीको बन्ध्याकरण भइसकेको हो ? मानिसले कसलाई पत्याउने, विचार भनिने कुनै अमूर्त चिजलाई वा त्यसलाई बोकेका मानिसहरूलाई ? कि त्यसरी विचार र राजनीति अथवा विचार र त्यो विचार मान्छु भन्ने मान्छेलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन ? के ती एउटै हुन् ? वा तिनको छुटाछुटै अस्तित्व हुन्छ ? यदि होइनन् भने ठीक वैचारिक धरातलमा उभिएको मानिस किन उल्टो बाटो हिँड्दै छ ? सही सिद्धान्तबाट दीक्षित मानिस किन गलत काम गर्दै छ ? स्वर्गको म्याप बोकेर नर्कको बाटो नाप्दै छन् हाम्रा वामपन्थी पार्टीहरू । कि तिनले बोकेको म्याप नै नर्कको हो ? यकिन छैन, यदि यिनीहरू हिँडिरहेको बाटो नर्ककै हो भने, त्यो अहिले बाँचेको नर्कभन्दा अझ खराब हुनेछ वा राम्रो ?
सिंगो समयको यस्तो सिजोप|mेनियाले नराम्ररी गाँज्दै छ मान्छेलाई । त्यसैले तुहिएका सपनाको गन्ध सुँघ्न बाध्य छु म । जताततै क्लोरमफेनिकलको गन्ध व्याप्त छ, नक्सलबारी जताततै फैलिएको छ ।
अत्याचारीसँग हुने लगातारको मुठभेडले भरिएको छ हाम्रो अनुभव ।
यहीँ नेर एउटा बूढो माली हाम्रो मृत्युग्रस्त सपनामा फूल र आशा राखेर जान्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन २४ १०:४९
कान्तिपुर दैनिक / https://www.kantipurdaily.com/koseli/2014/03/07/316068.html